10 Waxyaabood Oo Nin Kasta Oo Wanaagsan Looga Baahanyahay Inuu U Sameeyo Xaaskiisa Uurka Leh | Aayaha
Ninka ragga ah waxaa looga baahanyahay inuu gacan siiyo xaaskiisa waqtiga ugu adag ee ay u baahantahay gaar ahaan xilliga ay uurka yeelato.
Dhageyso oo warkeeda maqal xittaa haddii ay si qalafsan u hadleyso, inay ogaato inaad u heelantahay waxay siineysaa awood.
Dareensii inay qurxantahay
Wali waxay rabtaa inay dareento quruxdeeda xittaa marka ay uurka leedahay; waxay dooneysaa inay ogaato inay soo jiidasho leedahay iyadoo xaalad adag ku jirta o oculus isla markaana ay macquul tahay inuu jirkeeda isbedelay, usheeg inay qurxantahay oo dareensii quruxdeeda.
Mid fahma noqo marka ay niyad jabsantahay
Marka uu yimaado uur haweenka waxay wajahaan isbedello kala duwan; waxay daqiiqad noqoneysaa mid faraxsan halka daqiiqadda kalana ay murugsanaan karto, isku day inaad fahamtid dareenkeeda isla markaana aad dajisid xittaa marka ay careysantahay xilliyaadaas oo ay si fudud haweenka ku caroodaan, isbedellada hormooniska ayaa haweenka ka dhiga inay isbed bedelaan.
Waxaad sameysaa mararka qaar waxaad u wadaa hawo qaadasho, kool kooli oo noqo qof u fur furan.
La soco xaaladdeeda
Xittaa haddii aad shaqo ku maqantahay, wac oo ogoow sida ay xaaladdeeda tahay, waxay dareemeysaa inaad ka walwaleysid.
Uwad luga baxsi
Waxa wanaagsan ayaa ah inaad socod u wadid iyo luga baxsi taasoo caafimaad u ah xaaskaaga uurka leh iyo adiga sidoo kale, tani wayka farxineysaa waxayna sare u qaadeysaa kalgacaylka ay kuu qabto.
Noqo qof daacad u ah
Tani waa Meesha ugu badan ee ay ragga qaladka ku sameeyaan; ragga intabadan way qiyaanaan haweenka marka ay uurka leeyihiin mana wanaagsana, waxay kaa fileysaa inay wali jacaylkii aad u qabtay u qabtid isla markaana aad ku imaan qabtid.
Wal walka ka ilaali
Haweenka badanaa waxaa soo wajaha wal wal iyo kurbo marka ay uur yeeshaan, haddii ay xaaskaaga marxaladaas gasho noqo qof taageera, oo ka ilaali walwalka.
Tusi inaad jeceshahay
Marka ay uurka leedahay micnaheeda ma ahan inaysan dareen ama rabitaan alahayn, wali waxay kaa rabtaa inaad taabatid oo kalgacayl aad tustid.
Uurka marka ay yeelato waxaa yimaada wal wal iyo baahi badan, ha ula dhaqmin sida ragga qaar ay u dhaqmaan, quudi oo isku day inaad caawisid.
Xaaskaaga way kuu baahantahay marka ay uurka leedahay, haddii aad tahay nin wanaagsan waxaad u sameyneysaa waxyaabahan.